Kedu ihe bụ isi ọrụ nke Calcium chloride na Aquaculture
site ha na 21-04-07
Calcium chloride dihydrate bụ ihe kachasị mma iji belata uru PH nke ọdọ mmiri na aquaculture. Uru PH bara uru maka ọtụtụ anụmanụ ndị na-anọ mmiri na ọdọ mmiri aquaculture nọpụrụ iche na ntakịrị alkaline (PH 7.0 ~ 8.5). Mgbe uru pH dị oke elu (PH≥9.5), ọ ga - eduga na mmeghachi omume na-adịghị mma suc ...
Kụziere gị otu esi amata ọdịiche dị na Calcium chloride Dihydrate na Calcium chloride Anhydrous.
Calcium chloride, nnu nke mejupụtara ọcha Chlorine na Calcium, kemịkalụ usoro CaCl2, colorless cubic crystal, white or off-white, granular, * Tụkwasị, ezighi ezi granular, ntụ ntụ. Odorless, ubé ilu uto. Ọ bụkarị ihe ionic halide na bụ a na-acha ọcha siri ike na ụlọ okpomọkụ ...
Ngwa nke Sodium Sulfite anhydrous na akwukwo ihe omuma
Akwụkwọ ọrụ bụ ụlọ ahịa kasịnụ nke ngwaahịa Sodium Sulfite. Sodium Sulfite bụ otu n’ime ụzọ pulping kachasị mkpa na ụlọ ọrụ na-emepụta akwụkwọ, ọkachasị dabara maka ndị na-abụghị osisi. Uru nke usoro pulping a bụ agba ọkụ, obere oriri nke ịcha ọcha na ihe ndị ọzọ ch ...
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị dike kemịkal 100 100 100 "jikọrọ ọnụ" iji kwụsị ọrụ! Ego hikes nwere ike ịdịru ọnwa 3-6 ọzọ!
Otu ife na-adịghị larịị, ọzọ ịrị elu! Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ kemịkal 100 na-eduga "jikọrọ ọnụ" kwụsịrị nrụpụta a! Onu ogugu ohuru onu ahia nwere ike ibido! Aghọtara na ugbu a, enwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 ...
Ọnụ ego sodium metabisulfite na-ebili ngwa ngwa ma soda soda na sọlfọ na-arị elu
site ha na 21-03-12
Na Jenụwarị, Soda Ash, ụlọ sọlfọ nke bụ isi ihe nke SMBS gara n'ihu na-ebili. N'ịkwado site na ụgwọ ihe onwunwe, ụfọdụ ndị na-emepụta ntakịrị mụbara ahịa ahịa nke Sodium Metabisulfite, ụlọ ahịa Sodium metabisulphite ahịa ahịa kwụsịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa atọ nke continuou ...
Ngwongwo Chemical na Ngwaahịa bilitere 4 pasent na February site na afọ gara aga
Nchịkọta ọnụahịa ndị na-emepụta ihe na China (PPI) bilitere 1.7 pasent kwa afọ na February 2021, ihe ruru pasent 0.8 kwa ọnwa, dị ka National Bureau of Statistics (NBS) si kwuo na Machị 10. afọ na afọ na pesenti 1.2 ọnwa n’ọnwa. Na mo ...
Ime Soda nwere ike ịbụ ọgwụgwọ ezubere maka osteoporosis
site ha na 21-01-27
“Achịcha Soda na-adịghị egbu egbu na nke na-adịghị emerụ ahụ (Sodium Bicarbonate) bụ nke enwetara na nchekwa nano 'capsule' (liposome), na tetracycline nwere ikike na-eme ka ọkpụkpụ na-arịgo n'elu iji nweta adsorb na elu ọkpụkpụ ahụ. anụ ahụ site na ịmịpụ acid, ha nwere ike ...
O kwere omume iji dochie barium chloride na calcium chloride na nyocha bat
1. Mkpebi nke Sodium Hydroxide N'ime oge nke ọnwa abụọ, a nwalere ndị reagent abụọ n'otu oge ka ha na-enyocha ihe nlele maka ndị ahịa ahụ. Nsonaazụ nyocha nke ọdịnaya Sodium Hydroxide dị ala bụ nke kwekọrọ ekwekọ, ebe ntụgharị nke ọdịnaya sodium hydroxide dị elu bụ w ...
Nyocha banyere ọnọdụ mmepe nke ụlọ ọrụ Sodium Metabisulfite na China na 2020: ọnụ ọgụgụ ahịa ruru 3,4 ijeri yuan
Na 2014, mmepụta nke Sodium Metabisulfite na China bụ 885,000 tọn, na 2020, mmepụta Sodium Metabisulfite na China mụbara ruo 1.795 nde tọn. Kemgbe 2014, ọnụọgụ uto nke sodium Metabisulfite na China bụ 10.62% .China chọrọ maka Sodium Meta ...
Mgcl2 siri ike, Mmetụta mmiri nke Barium Chlorie, Flakes kacha mma magnesium, Ogbe 2, Sodium Ash, Soda Ash Ahịa,